UMnqithi uqophe umlando omuhle wokungahlulwa eqeqesha amaqembu amathathu ahlukene kwi-PSL | Scrolla Izindaba
UMnqithi uqophe umlando omuhle wokungahlulwa eqeqesha amaqembu amathathu ahlukene kwi-PSL
Umlekeleli womqeqeshi we-Mamelodi Sundowns, uManqoba Mnqithi, usize leli qembu ekuqopheni imidlalo engama-22 lingahlulwa kuyo yonke imiqhudelwano.
Kodwa-ke, akulona kuphela kweqembu le-DStv Premiership elizuze lo msebenzi omuhle ngaphansi kobuholi bukaMnqithi.
Lo mqeqeshi oneminyaka engama-49 manje usebenzisa amava akhe njengomqeqeshi oyinhloko awazuza ezikhathini ezedlule ngenkathi ephethe i-Lamontville Golden Arrows naMazulu.
Ngokumangazayo, uMnqithi uhole izinhlangothi zombili zaseThekwini wazifaka emabhukwini amaqembu angahlulwa kwi-Premier Soccer League.
I-Arrows ayikaze ihlulwe emidlalweni eyi-12 phakathi kukaMbasa noMandulo ngowezi-2009 – inqobe kasikhombisa yadlala ngokulingana emidlalweni emihlanu – kulokho isame isikhathi eside iqhubeka ngaphandle kokuhlulwa kwi-PSL.
Abafana’Besthende bagcine ngokunqoba isicoco sabo sokuqala lapho bephakamisa isicoco se-MTN 8 ngowezi-2009 ngaphansi kukaMnqithi.
Umqeqeshi wamanje we-Arrows uMandla Ncikazi ubathathe umdlalo owodwa wokufanisa lo mkhankaso, kodwa umlando wabo wokungahlulwa emidlalweni eyi-11 uqedwe ukuhlulwa ngamagoli amane kwamabili idlala ne-Cape Town City.
UMnqithi ube esehola Amazulu emdlalweni wabo omude bengahlulwa ku-PSL ngemuva kwemidlalo eyi-11 kusukela ngoMasingana kuya kuNdasa ngowezi-2011.
Ubhalise ukunqoba okuthathu nokudlala ngokulingana okuyisishiyagalombili.
UMnqithi, kanye nabaqeqeshi uRhulani Mokwena noSteve Komphela, umelwe imidlalo emithathu edlala ne-Sundowns kule sizini.
Baqhubeka nokukhululeka bebheke kuma-quarterfinal e-CAF Champions League, futhi bahleli kahle phezulu kwi-Premiership futhi basembangweni we-Nedbank Cup.
Ukuthi manje usethathe i-Sundowns isikhathi eside ngaphandle kokuhlulwa kuyo yonke imiqhudelwano kuqinisekisa ukuthi ungomunye wabaqeqeshi abahamba phambili ezizukulwaneni zakhe kwi-PSL.